Ziningi izindlela ekukholelweni ngokuqinile kuze inhlabathi ukwenza kube efanelekayo kuqale ukwakhiwa. Lokhu kungenziwa ngokusebenzisa ukunyakaza looped ka namaloli ezifana amaloli, lorries. Ogandaganda angabekwa umhlabathi, alahle amaloli ohlangene. Nokho, indlela ephumelela kakhulu imishini ukuthi ahloselwe ngokukhethekile le njongo. Yiqiniso, ezinamasondo nhlabathi compaction. Kodwa lokho rinks ezisilungele kangcono lo msebenzi inikezwe? Yiziphi futhi iyiphi kuwo ukwenza umsebenzi ongcono nge umsebenzi wabo? Ake sizame ukuthola it out.
Inhlabathi compaction usebenzisa ezinamasondo
Phakathi nomsebenzi wokwakha, ikakhulukazi esigabeni sokulungiselela zensimu laying asphalt komgwaqo, ngokuvamile kuyadingeka ukuze ngixazulule inkinga yokuntuleka kwezinto Looseness ngokweqile kwenhlabathi. Nezinto ezidingekayo angathengwa, aqashiwe noma oda uphawu ezinamasondo inhlabathi. Intengo amasevisi anamagama ahlelwe njengoJohane kuxhomeke ezicini ezihlukahlukene. Phakathi kwabo, endaweni umhlabathi okumelwe uphawu, inani imishini adingekayo umsebenzi, umehluko phansi kwendawo ofuna nokulinganisa. Ngokwesibonelo, oqondile compaction roller indunduma ukukhiqiza nzima icekelwa phansi ogandaganda, bese kuphela uphawu. Kunezinhlobo eziningana amadivayisi, kodwa isimiso isinyathelo eyedwa. By the way, ungakwazi ukuqasha kubo intengo ruble 1300 ngehora.
Ingxenye esemqoka yimuphi rink elikhona roller. Lokhu isilinda esindayo ukuthi wenza umsebenzi uphawu oluthi namasondo phambi umshini ngesikhathi esifanayo. Njengoba ukunyakaza roller umtselela wesikhatsi ke isisindo kanye namazinga phansi lapho ehamba. Ama-roller nhlabathi compaction anemisila izinto ezimbili idatha. Omunye wabo, njengoba kushiwo ngenhla, usekhonza njengomshumayeli wesikhathi isici kubekwa uphawu, futhi owesibili, misa, ngokuthi "nceku" roller. Kudingeka ukuqondisa imoto noma isiqondiso. oluvala amasondo Front onobuhle amadala ifakwe ezinamasondo amandla enophephela. Ngo imishini yesimanje, idrayivu wokubacindezela isetshenziswa. Lokhu kungenxa ukuklanywa imishini yanamuhla. Sekusele kancane zonke vibration. Isidlidlizi lezi zinhlelo ibandakanya drive wokubacindezela. Futhi njengoba ohlelweni ayo ka uhlelo efanayo isetshenziswa, ukusetshenziswa drive wokubacindezela front kushaft kuyinto isixazululo elikhulu.
Ama-roller nhlabathi compaction zingahlukaniswa zibe static vibration. Into yokuqala is ohlangene kuphela isisindo sayo. Idivayisi roller uhlobo sesibili sihlanganisa idivayisi vibratory.
Kodwa lena kuphela kusigaba uhlobo umthelela emhlabathini. Eqinisweni izinhlobo okuningi. Ama-roller zihlukaniswa nangokwengeziwe ezinamasondo fomu. Ngakho, ngezinye izikhathi ingaba umthombo cam noma pneumowheel, inhlanganisela futhi latticed. ezinamasondo womoya ukulawuleka yimuphi hlobo inhlabathi. imishini Cam ngokuyinhloko esetshenziselwa uphawu izinhlobo inhlabathi pliable. Lokhu kungaba ubumba, ngisho nge touch ngohlalwane. Sand nomhlabathi usemanzi - hhayi emkhakheni esifanele uhlobo cam roller.
Ukwakheka elinesimo isixwayisi idivayisi roller odala vibration eqinile. Isimiso yokusebenza isidlidlizi ilula: umgodi esindayo uzungeza emhlabeni maphakathi gravity wehliswa, kanjalo okubangela kunyakaza ephezulu imvamisa ezingase cindezela primer.
Imvamisa lapho isisebenzi uyakwazi dlidliza zibe roller kusuka 24 kuya 48 Hz. 1 Hz ilingana komunye umjikelezo ngomzuzwana. Futhi indima enkulu sokuhlanganiswa inhlabathi ufeza amplitude we vibration sigubhu. Le nkomba uhlelo roller vibratory ungalungisa opharetha. Ezimweni eziningi, ukusetshenziswa ezimbili izinhlobo izindlela: amplitude 0.6 mm kuya ku-1 mm amplitude 1.35 mm kuya 2.2 mm.
Control izinhlelo yesimanje ezinamasondo vibratory ukuvumela ukuba ulungise kokubili nemingcele: amplitude kanye nokuvama roller oscillation. Lesi sici ikuvumela ukulungisa umshini ukusebenza umhlabathi ethile, yenza yona izici density yayo, viscosity, flowability, nokunye.
isixwayisi inhlabathi compaction ezinamasondo kungase kusetshenziswa amasu ahlukahlukene. Kuvele isu ngempumelelo ubhekwa inhlabathi compaction e maqembu eziningana. Okokuqala, nge amplitude esiphezulu kanye nobuningi ezijulileyo oscillation we umgqomo, bese kancane kancane imvamisa vibration. Ngakho, uphawu izingqimba lokuqala ezijulile inhlabathi, bese elingenhla.
Plus isakhiwo kuthathwa kalula isihlobo yayo. Lokhu rink lapho zibhekene nomsebenzi ngaleso isisindo ephansi kakhulu kunalokho-prototype yayo static. Njengoba lokususa ngokwawo mayelana nomsebenzi owenziwayo. indlela Static igodla umhlabathi abushelelezi kunamafutha isixwayisi, okwathi ngemva kwalokho ebonakalayo ukukhanya wave phezu komhlabathi.
Ama-roller nhlabathi compaction uhlobo static esetshenziswa kancane, bona kwathathelwa indawo entsha kudivayisi ukubekwa uphawu vibration, petrol kuyinto ukonga ngaphezulu. Kodwa static isikhathi eside alikafiki aphume arsenal izinkampani ukwakhiwa. Isizathu salokhu ukuphikelela yale mishini kuthiwa ukuthi ingasetshenziswa lapho vibration anoma yiluphi uhlobo kuyinto engathandeki kakhulu. Ngokwesibonelo, zisebenzisa ezinamasondo ezinjalo kuphela, njengoba lihlangabezana nezidingo zokuphepha lapho ebeka asphalt kuleli bhuloho noma ngezinyawo.
Futhi, lolu hlobo izindlela bashiya ngaphezulu ngisho inhlabathi. Ngakho-ke, bajwayele ezimweni lapho kubaluleke ebusweni ekahle.
Kusukela nemiphumela ethile engathandeki sobala Kuhle kokusho futhi okusezingeni eliphezulu petrol. Isisindo rink mikhulu, futhi kudinga maqembu ngaphezulu ukuze zithole imiphumela izinga.
Ngokuthi ezinamasondo latticed, ebusweni ukusebenza shaft elinendawo isakhiwo ngehele. Lolu hlobo lwe-umshini uphawu isetshenziswa amacala umsebenzi ngezizathu eziyinkimbinkimbi. Ebusweni lukathayela we roller ubulala Clumps elikhulu inhlabathi, nesicu eliqinisa nabo isisindo sakhe. Lokhu kungaba wusizo uma inhlabathi eqandisiwe yinqwaba umhlaba noma ubumba isihlabathi amanyela. Isakhiwo esele okuvela kuyo le ezinamasondo yezinyoni akuhlukile lonke.
Yehluka nabanye ukuthi they cha fanele imiqulu. Kunalokho, amasondo front futhi bakhulise ku imishini esuke ifakwe amathayi ampontshwayo kwababusi. Amasondo zitholakala eduze kakhulu komunye nomunye, kodwa kukhona izikhala ezincane phakathi kwazo. Lokho-ke akayekethisi izinga umshini emsebenzini, emgqeni ongemuva amasondo aboshelwe ngendlela yokuthi trajectory yabo asishayisani ne amathrekhi kwamasondo phambi, kanye overlying baprofetha ngasikhathi sinye.
Izibuyekezo ezahlukene izindlela
Ama-roller for konke okungenhla kukhona ithuluzi esisemqoka iyiphi esakhiweni. Akumangalisi-ke ukuthi wakwazi ukuqoqa inqwaba Izibuyekezo abakhi. Phakathi kwabo kukhona okuhle nokubi. Izibuyekezo ezingezinhle ngokuvamile kuphakama ngenxa ukusetshenziswa umshini, lapho ukusetshenziswa kwalo akwamukeleki. Ngokuvamile wagxeka amasu ezindala ezifana ezinamasondo static, le kungathembeki ka isidlidlizi. Kufanele kuqondwe ukuthi imishini enjalo kufanele isetshenziswe kuphela ezimweni ezithile, futhi kuzo abanayo engena esikhundleni ehloniphekile.
Zonke amadivaysi ngenhla azinakusilela amasayithi ezinkulu zokwakha, kanye kubekwa asphalt komgandayo futhi eminye imicimbi esikalini ezimbonini. Kodwa kuthiwani uma ufuna ithuluzi engabizi ngokunginika ikhuluma noma ukulimela ukuziphilisa, okuyinto akudingi izinguquko amafutha, nophethiloli battery amashaja kanye nanoma yimiphi eminye yesondlo?
Ezimweni ezinjalo, compactor inhlukano isetshenziselwa compaction. Leli thuluzi umgodi ezisindayo isibambo, okuyiwona umuntu angakwazi Roll it endaweni efanele. idivayisi okunjalo isetshenziswa ukuvala amba emhlabeni ramming imfucumfucu lezisekelo, inhlabathi compaction ngekusasa utshani, nezinye imisebenzi eminingi ezingeni lelifana nele.
Indlela yokwenza ngesandla roller icwecwe inhlabathi ngezandla zabo
Ezitolo DIY, ungathenga imodeli ngomumo eyenziwe, kodwa ungakwazi kalula wenze rink eqhweni ukuze titibonelo letinkhulu tekuvumelana inhlabathi ngezandla zabo. Ingxenye esemqoka ithuluzi ezifana kuyinto kushaft esindayo. Into esemqoka - ukuthola ukuthi ukwenza lokhu design ngokuningiliziwe futhi isibambo lingakhiwa kusuka kunoma iyiphi ipayipi, eguqa kuso engela oyifunayo, futhi elikulo elibambe ukhululekile, isibonelo, othathwe isondo ibhayisikili. Indlela elula yokwenza umgodi kanzima - esetshenziswa njengoba ezinkulu umthamo metal yakhe, egcwele isihlabathi noma ezinye izinto ezisindayo. Ukuze sisebenze roller inhlukano akubi sokuhlushwa, isisindo sayo kumele singeqi 120 kg. ububanzi Ngakho elilungile - 1 imitha.
Hand roller for titibonelo letinkhulu tekuvumelana inhlabathi kungabuye ezenziwe asbestos noma amashubhu Ceramic of ubukhulu ezifanele. Ngesikhathi nendawo ngamapayipi enjalo ufakwa tube lensimbi. Into esemqoka - ukushutheka uqonde kahle, kungenjalo ngeke zisebenze. Isikhala phakathi kwezindonga engaphakathi ye asbestos ipayipi futhi udonga lwangaphandle tube lensimbi ligcwele usimende nosimende. Lapho ukhonkolo Uqinisa, ngamapayipi metal bufakwe isibambo axis.